Vol. 2 DECEMBER, 1905. Nha. 3
Pfungwa dzinotanga yechitatu Quaternary.
Yekutanga quaternary: kuziva (aries), kufamba (taurus), chinhu (gemini), kufema (cancer), kuri munyowanial world. Iyo yechipiri quaternary: hupenyu (leo), fomu (virgo), zvepabonde (libra), uye kuchiva (scorpio), ndiwo pezvakaitwa nazvo mazano yepanyika yemanobial inoratidzwa mune yakaratidzwa phenomenal world. Iyo yakaratidzwa phenomenal nyika inonzi inovapo nekufema uye inoguma nehunyanzvi. Yechitatu quaternary, kutanga nekufunga, inosanganisira kufunga (sagittary), humwechete (capricorn), mweya (aquarius), uye kuda (pisces).
Sezvo hupenyu ndiko kutanga kwegadziriro mukuvakwa kwemuviri kune vekunze manzwisisiro, saka fungwa ndiko kutanga kwegadziriro mukuvaka kwemuviri wekunzwa kwemukati.
Mufungo kusanganisa kwendangariro uye chishuwo. Pfungwa kuburikidza nemweya wekufema inovhuvhuta pane isina kugadzirwa yemuviri chishuwo chiri mumunhu, uye chishuwo chinomuka seyakaumbwa chisina kugadzikana, chichibatanidzwa pamwe nemweya, chinopihwa fomu uye chobva chava kufunga.
Pfungwa dzinopinda mumuviri chete kuburikidza nedzimwe nzvimbo. Hunhu hwepfungwa hunogona kunge huchizivikanwa nekushanda kwenzvimbo iyo painopinda mairi. Kuwanda uye kusanganiswa kwemifungo kwakawanda uye kwakasiyana kupfuura mamirioni ezvisikwa kubva kwavari, asi pfungwa dzese dzinogona kuverengerwa pasi pemisoro mina. Izvi zvepabonde, zvekutanga, zvemanzwiro, uye zvehungwaru.
Pfungwa dzechimiro chebonde dzinomutsa uye dzinopinda nepakati peizvozvo uye, dzichiita maererano nesolar plexus uye kumutsa nhengo dzedumbu mudumbu, dzinosimuka semhepo inopisa kusvika pamoyo. Kana vakawana kupinda ipapo vanokwira semhando dzisingadzivisiki kumutsipa uye vanobva vapfuura mumusoro mavakapihwa fomu - yakajeka uye yakasiyana sekukura kunoita munhu. Kana munhu achinge anzwa kukurudziro munharaunda yebonde anogona kuziva kuti kumwe kurudzira kuri kuita paari. Kana achizodzinga kana kukanganisa nzira iye anofanirwa kuramba achiibvumidza painobvunza
Pamusoro pachiedza, pasi pane hupenyu. Zvekare kurongeka kunoshanduka, uye zvino, kuburikidza nekufunga kwekuda, aya akaratidzirwa nyika dzehupenyu ne fomu, zvepabonde uye chishuwo, uye akafunga pachako, anochinjiswa nealchemy kuchiedza. ZODIAC. kupinda mumoyo, uye nekunzwa mukati memoyo kuda kune zvaari mukati muviri, kana nekutendeudzira kufunga kune kwakakwirira kuziva uko kwaanogona kusvika uye kukwezva kuvepo kwayo. Manzwiro anozobva apinda mune yeumwe yekusuwa nekukwidziridzwa, uyezve rugare. Zviri nyore kupfuudza pfungwa pane kuidzingira kure. Hapana fungidziro inogona kuurawa kamwechete sezvinombotendwa zvisirizvo. Inogona kunge ichidzingwa asi ichadzoka zvichienderana nemutemo wecoclic. Asi kana ikarambiwa chikafu nguva imwe neimwe painodzokera inozopera simba uye pakupedzisira inopera.
Pfungwa dzechimwe chinhu chechisikirwo dzinopinda mumuviri kuburikidza nemakara uye pores yeganda. Pfungwa dzekutanga ndedziya dzekutsamwa, ruvengo, hutsinye, godo, kushuva, nzara uye nyota, uye izvo zvinokonzeresa nhengo shanu dzekunzwisisa, sekukara, kana kuona kupiswa. Ivo vanoita pane solar plexus uye vanomutsa iwo muti wetsitsi, nemidzi yawo pakati pebonde, uye matavi awo mune solar plexus, kana kutamba pamuti uya wetsitsi, iwo mudzi iwo uropi, uine matavi mukati solar plexus.
Idzi pfungwa dzechinyakare dzinoitwa pamusoro uye nekupiwa simba nenhengo dzedumbu uye kusimuka kuenda pamoyo, kana vakagashirwa, vanokwira musoro, vanotora fomu chaiyo uye vanotumirwa kubva kune imwe yekuvhurika senge ziso kana muromo, kana zvisina kudaro ivo vanodzikira, vanovhiringidza muviri uye, nekukanganisa maatomu ayo ese, vachiita kuti apindure pakuita kwavo. Chero simba rechimiro kana pfungwa yakaipa iyo inowana yekupinda nepakati inogona kushandurwa nekushandisa pfungwa panguva imwechete pamwe nekufunga kwakajeka kwechimwe chimiro, kana nekushandura iyo pfungwa kune imwe yeusina udyire sezvaakambofunga; zvikasadaro iyo pfungwa ichave yakakwidziridzwa musimba, ikapihwa fomu sekugona kwemunhu, uye yotumirwa munyika kuti ite vamwe vanozozvibvumira.
Pfungwa dzechimiro chemanzwiro emunhu anopinda mumoyo nenzira yekuvhura uye nzvimbo mukati memazamu. Ndedzipi pfungwa dzepfungwa (dzimwe nguva dzinodaidzwa kuti kunzwa), dzinogona kunzwisiswa zvakanyanya nekufunga kushora kwakasangana nevamwe vanhu nekuona kuteurwa kweropa, kana kuona hurombo kana kutambudzika kwevamwe kana zvasvitswa zvakananga nekusangana kwakadaro, asi kanganwa nezvazvinenge zvichangoita sekunge zvawaona nemanzwiro zvanyangarika, ipapo mania echitendero, pfungwa dzekumutsidzira, kufarira kurwa, kusanzwira tsitsi, uye kufambisa kwemhomho inomhanyisa. Zvinoenderana nehunhu hwemanzwiro ivo vanoburuka kubva pamoyo kuenda kumatunhu akadzika, kana kusimuka ndokutora fomu mumusoro uye varipo vakasimudzirwa kune kukwirira kwakanyanya uye nesimba. Mhando dzose dzemafungiro nemafungiro zvinotsvaga kugamuchirwa kumusoro nekuti musoro ndiyo nzvimbo yehungwaru uko mafanirwo anopiwa mafomu uye pfungwa dzinoshanda dzinogadziridzwa, dzinovandudzwa uye dzakashongedzwa. Musoro une kuvhurika kunomwe: mhino, muromo, nzeve, uye maziso, ayo, pamwe neganda, anobvuma zvakaringana izvo zvinhu zvishanu zvinozivikanwa kune vekare sevhu, mvura, mhepo, moto, uye ether, inoenderana neiyi mirangariro yedu kunhuwa, kuravira, kunzwa, kuona, uye kubata. Izvo zvinhu uye zvinhu zvekunzwisisa zvinoshanda kana kuburikidza neizvi zviteshi nzira zvinotanga kushanda mukati merimwe kana zvishanu mabasa epfungwa. Mabasa mashanu epfungwa anoshanda kuburikidza nekunzwa shanu uye nhengo shanu dzekunzwisisa uye ndiwo mafambiro echikamu chakasangana chepfungwa.
Iwo emakirasi mana emifungo ane iwo mabviro kubva kune zviviri zvinyorwa: pfungwa dzinobva kunze uye pfungwa dzinobva mukati. Zvave zvichiratidzwa kuti makirasi matatu ekutanga mazita anonzi anobva kupi asina, kukurudzira nzvimbo dzawo uye kusimuka kumusoro. Pfungwa dzese dzakadai dzinoshanda sezvinhu uye chikafu chinopinda mudumbu repfungwa sekungofanana nechikafu chepanyama chinotorwa mudumbu. Ipapo chikafu chepfungwa chinopfuura pamwe neyekudya chikafu chakafanana neyeakamerary canal, ipo chinoitwa nenhengo mumusoro zvine analogous mabasa kune iwo ari mudumbu nepadiki nzvimbo. Iyo cerebellum idumbu repfungwa, uye zvirevo zvemakonzo iyo iyo iyo iyo pfungwa yekufunga inopfuura, mukati mekugaya uye kutora, isati yatumirwa kubva pahuma, ziso, nzeve, mhino, kana muromo. Yakaumbwa zvizere munyika, pane chinangwa chayo chekuita zvakanaka kana zvakaipa. Saka izvo zvinoonekwa kana pfungwa dzinogashirwa kuburikidza nepazasi zvitatu nzvimbo dzinobva kune ekunze sosi uye dzinogona kunge dzichidyiwa sechikafu cheuchenjeri hwekuita chimiro.
Mufungo unobva mukati unobva mukati mawo mumoyo kana mumusoro. Kana mumoyo, chiri mwenje wakatsiga unovhenekera rudo rusina mutsindo wezvinhu zvese, asi runogona kuve rudo rwepamoyo uye rwuchipfuura mukupindura kuchema kwevanhu, kuburikidza nemazamu, kana isina kumutswa semurazvo. yekusuwa musoro. Kana ikasimudzwa kudaro inogona kuongororwa, kugadzirwa, uye kuenzaniswa nekufamba kwepasirese mune pfungwa kunojekesa maitiro mashanu ehungwaru akataurwa. Iko-yakapetwa kashanu kushanda kwepfungwa kuburikidza nemanzwiro anozove anoongwa uye anonzwisiswa. Iyo fomu yekufunga iyo inotangira mukati memusoro inogona kushaya kunzi ipfungwa sezvo ichiuya yakanyatsoumbwa pasina chero maitiro epfungwa. Panguva imwe chete nechitarisiko chayo mumusoro mune chiito mudunhu pachigadziko chemuzongoza icho chinoita kuti musoro uzadzwe nechiedza. Muchiedza ichi chinonzwisiswa zvemukati mepfungwa. Kunobva kufunga kwacho kunobva mukati medu kune mumwe munhu anonzi ego kana kuti Wekumusoro. Mufungo wakadaro unogona kudanwa mukuda chete neuyo asvika pakuvhenekerwa uye asvikira kuhungwaru. Kune vamwe vese zvinouya zvisingatarisirwi, mukufungisisa kwakadzama, kana nekushuvira kukuru.
Kufunga haisi pfungwa; chishuwo. Mufungo chiito chakabatanidzwa chechido nepfungwa. Mupfungwa iyi inogona kunzi pfungwa yepasi. Kufunga kunokonzerwa kungave kuri nekuita kwekuda kwepfungwa, kana kwepfungwa pane chishuwo. Mufungo une mativi maviri; icho chakabatanidzwa nechishuvo uye nemanzwiro, ndiko kushuva, kuchiva, uye chishuvo, uye icho chakabatanidzwa nepfungwa mune zvishuviro zvaro.
Mukati meguruva rakakomberedzwa remudenga risina makore mhepo inovhuvhuta uye fosi yefirimu mhezi yakaita senge. Kubva pane izvi, mafomu anooneka anowedzera saizi uye achikurisa uye kusviba kusvika denga rose razara uye mwenje wezuva uchivharwa. Dutu remhepo, makore uye mamwe mafomu akaraswa murima, akaputswa nemheni chete. Dai rima raivepo rairamba riripo, rufu rwaizopararira pamusoro penyika. Asi Chiedza chinogara kupfuura rima, makore anogara achinaya, uye mwenje unodzinga rima, zvinoonekwa nedutu. Pfungwa dzinogadzirwa nenzira imwecheteyo kana chishuvo chikaitika chimiro mukubatana nepfungwa.
Sero rega rega riri mumuviri rine zvinyorwa uye hutachiona hwekufunga. Matsimba uye pfungwa dzekunze dzinogamuchirwa kuburikidza nebonde, elemental, uye nzvimbo yemanzwiro; kunhuwirira, kuravira, kurira, mavara, uye manzwiro (ekubata), pinda mumuviri negedhi rekunzwa kuburikidza nenzvimbo shanu dzenjere; pfungwa dzinofema zvine mutsindo, uye panguva imwe chete nekufamba kwakapetwa munzira mbiri dzakatarisana, kuburikidza nemuviri wese, uye nekudaro unomuka uye kusunungura hutachiona hwehupenyu; chishuwo chinopa gwara kuupenyu iro rinosimuka pamwe ne vortex-kunge kufamba kwemoyo, richitambira kurudziro kubva munzira yaro painenge ichikwira. Kana iko kufunga kwekumwe kutya kunotyisa, kuchiva, kana kutsamwa, uko kunopinda nekutsanangurwa kwemoyo, chimedu, chakatsvinya, chakafanana nerima chingakwira mumusoro, chingasimudza pfungwa ndokuvhara kunze kwechiedza. chikonzero chinobva pamoyo. Ipapo dutu rekushuva richaputika, pfungwa dzakasununguka senge mheni inopenya, uye nepo dutu remhepo rinopera rinopera bofu rinofanira kukurira; kana ichiramba ichipenga kana kufa ndiwo mhedzisiro. Asi sezvazviri, kutsamwa kwegutu rakadai kunobva kwapera, uye mhedzisiro yacho inogona kuoneka muchiedza chechikonzero. Iko kuchiva kunowanikwa kunopinda pamoyo - kana kuri kwekushupika kwemapofu kunogona kukurirwa - kumuka mune yakasarudzika ruvara-rwakavezwa murazvo kumutsipa, kubva ipapo kune cerebellum neCerebrum kwaanogamuchira zvinhu zvese zvine musoro mukati mayo. maitiro ekuchera, assimilation, shanduko, kukura, uye kuberekwa. Iro olinobory inopa iwo kunhuhwirira uye kusimba, iyo gustatory centre inoita kuti ivhure uye iite seyakaipisa uye nyoro uye inonaka, nzvimbo yekuongorora inoitisa mune yehutsinye kana yakanyorovera noti, nzvimbo inoonekwa inoipa uye inoipfumisa neyakajeka uye ruvara, nzvimbo yekunzwisisa inoikanda nekunzwa uye nechinangwa, uye iyo inozozvarwa munyika kubva kune imwe yenzvimbo dzemusoro chinhu chakanyatsoumbwa, kutukwa kana chikomborero kuvanhu. Iwo mwana wepfungwa uye chishuwo. Kutenderera kwayo kwehupenyu kunoenderana nemugadziri wayo. Kwaari kunobva chikafu chake. Pfungwa dzisingagashire chakakodzera kudya panguva yekukasira, kana yakazvarwa isati yasvika, dzakaita semapundu egrey, kana zvinhu zvisina hupenyu zvisina kana shamhu, zvinodzunga pasina chinangwa kusvika pakudhonzwa mumhepo yemunhu asingade chokwadi, kuti apinde mukati uye kunze kwepfungwa dzake kunge gonyeti kuburikidza neisina imba. Asi pfungwa dzese dzinogadzirwa nepfungwa vana vepfungwa idzodzo, avo vane basa nazvo. Ivo vanounganidza mumapoka zvinoenderana nehunhu hwavo uye vanoona zvahwo hupenyu hwamangwana hwemusiki wavo. Semwana, pfungwa inodzokera kune yekuriritira mubereki wake. Kupinda mumhepo yake inozivisa kuvapo kwayo nekunzwa kunoenderana neiyo chimiro, uye inoda kutariswa. Kana iyo pfungwa ikaramba kuvaraidza kana kuteerera kune zvainotaura zvinomanikidzwa nemutemo wemijeketi kubvisa kusvika kutenderwa kuchibvumira kudzoka kwayo. Munguva iyi inoshaya simba uye haina kunyatsosarudzika muchimiro. Asi kana pfungwa ichifadza mwana wavo, inosara kusvikira yazorodzwa uye yasimbiswa uyezve, semwana ane chido chakakwaniswa, anomhanyisa kuenda kunobatana nevamwe vake mumitambo uye kugadzira uyo anotevera kukumbira.
Pfungwa dzinouya kune imwe mumasumbu, mumakore. Simba rekutonga rezviratidziro zodiacal, maererano nezvinomwe zvemunhu zvinongedza kutungamira kwemifungo yake, uye chiyero chekutenderera kwavo. Sezvo iye akagonesa pfungwa dzerumwe rudzi, pakudzoka kwavo paupenyu mushure meupenyu, saka akavasimbisa zvakakwana, saka ivo pachavo vakadzora simba rekupokana nepfungwa dzake neemaatomu emuviri wake, kusvikira pakuonekwa kwemifungo iyi, mhemo, manzwiro uye kusimudzira, kune simba uye kusingadzoreki kutya kwekupedzisira. Pfungwa dzinounganidzira, kusimbisa, kukisa uye kuve mafomu emuviri, zviitiko uye zviitiko, muhupenyu hwomunhu pamwe nerwemarudzi. Naizvozvo kunouya kamwe kamwe kusingadzoreki maitiro ekuda kuzviuraya, kuponda, kuba, kuchiva, pamwe nekukurumidza zviito zvemutsa uye kwekuzvipira. Saka panouya ndudzi dzisingadzoreki dzerima, rekushata, rekushata, rekuodzwa mwoyo, rekusava nechokwadi uye kutya. Izvi zvinouya kuberekwa munyika ino nehunhu hwemutsa, rupo, kuseka, kana kugadzikana, nevanopesana navo.
Munhu anofunga uye zvakasikwa zvinopindura nekushamisa pfungwa dzake muchimiro chichienderera mberi iye achitarisa achitarisa nekushamisika akatarisa, asingarangarire chikonzero. Munhu anofunga neruchiva, godo uye kutsamwa, uye mafusho uye anosununguka pamwe neakasikwa uye mumwe wake munhu. Munhu anofunga uye anobata zvisikwa nemufungo wake, uye zvisikwa zvinounza chibereko chake mumhando dzese dzesimba sevana vepfungwa dzake. Miti, maruva, zvikara, zvinokambaira, shiri, zviri mumafomu avo kuchema kweyepfungwa dzake, nepo mune imwe neimwe yemamiriro avo akasiyana kuratidzwa uye hunyanzvi hweimwe yezvido zvake. Zvisikwa zvinobereka zvinoenderana nemhando yakapihwa, asi pfungwa yemunhu ndiyo inosarudza mhando, uye mhando yacho inochinja chete nepfungwa yake. Nguruve, makwayana, mapango, mapuruve, nenjiva, zvicharamba zvichiratidzika kureba sezvo munhu achizozviita nyanzvi nehunhu hwepfungwa yake. Mitezo inosangana nehupenyu mumiviri yemhuka inofanirwa kuve nehunhu hwayo uye chimiro chakatemwa nemafungiro emunhu kusvikira ivo pachavo vachigona kufunga. Ipapo havachazodi rubatsiro rwake, asi vachazvivaka zvavo mafomu kunyange sekufunga kwemunhu zvino kuvaka zvake uye kwavo.
Se lemniscate, munhu akamira mune yehumanal uye phenomenal worlds. Kubudikidza naye chinhu chinosiyanisa sechinhu chemweya uye chinoitika munyika ino yemuviri mumamiriro ayo manomwe kubva pane mumweya kuenda pane chimwe. Kubudikidza nemurume, uyo akamira pakati, aya manomwe mamiriro ezvinhu akabatanidzwa uye zvakare kuita chinhu. Ndiye mushanduri anopa fomu kune zvisingaonekwi kana achidikitira uye nekuchisimbisa-kuburikidza nemafungiro. Iye anoshandura chinhu chakasimba kuita chisingaoneki uyezve kuti chioneke - nguva dzose nekufunga. Saka anoenderera mberi muzvirongwa zvake zvekushandura nekunatswa, kugadzira nekuputsa, kuparadza nekuvaka iye miviri yake, mhuka nemiriwo nyika, hunhu hwemamwe marudzi, mamiriro ekunze epasi, kubvumirana kwenyika dzayo, hudiki hwayo uye zera. uye pwere mudiki rese- nguva dzose kuburikidza nekufunga. Saka kubudikidza nemafungiro anotakura chikamu chake mune iro basa guru rekushandura nyaya kusvika yangova Consciousness.